VAR BAAN KA FIIRSADAY: Ricky Kaka oo rooso ku qaatay qiso la yaab leh! (Daawo) – Gool FM
(Orlando) 13 Agoosto 2017 – Hannaanka cusub ee loo yaqaanno VAR ayaa horraanba dood dhaliyay marka ay timaaddo ciyaarta oo uu caajis ka dhigo maaddaama loo baahan yahay in dhowr jeer ciyaarta la hakiyo si go’aan loo gaaro, haatanna sheeko kale ayaaba dhacday.
VAR ma aqoonsana saaxiibtinnimada, waana sababta KAKA garoonka looga eryay iyadoo lagu eedaynayo inuu ”gacan ka hadal ku kacay” waloow ay xitaa muuqato inuu la kaftamayay saaxiibkii hore jaalle Aurelien Collin.
Sheekadan cajiibka ah ayaa ka dhacday kulan ka tirsanaa MLS oo dhexmaray New York Red Bulls iyo Orlando City oo ay kooxda hore 3-1 ku hoggaaminaysay waxayna dooddu ka dhalatay Higuita iyo Davis, balse intii go’aanka la sugayay ayuu Kaka wuxuu wejiga gacanta ka mariyay Collin isagoo la kaftamaya.
Balse waxaa sheekada qasay garsoore Jorge Gonzalez oo ku doodaya inuu VAR kasoo fiirsaday Kaka oo laacibka dulminaya, waxaana la arkayay labada laacib oo garsoorihii ku qancinaya inuu go’aanka bedelo iyagoo leh: “War waan kaftamaynay, waxaan nahay walaalo!”
Laacibka reer Brazil oo ah laacib inta badan lagu yaqaanno degganaan ayaa filaya in go’aankan cajiibka ah dib loo eego oo aysan ka galaafanin ciyaarta xigta.
— Major League Soccer (@MLS) 13 augusti 2017
Kylian Mbappe oo laga yaabo in keydka loo dhaadhiciyo kulanka galabta